စင်ကာပူသို့ သင့်အိမ်မက်ကားကို တင်သွင်းရန် လွယ်ကူသော အဆင့် ၁၆ [+ အကြံပြုချက်များ]
စင်္ကာပူတွင် သင့်ကားတင်သွင်းခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်း သိထားရမည့် အဆင့် 16 အဆင့် + အကြံပြုချက်များ
စင်္ကာပူသို့ တင်သွင်းလိုသော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် မော်ဒယ်လ်တစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ကားတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ခက်ခဲပြီး အချိန်ကုန်နိုင်သည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်၊ ကားတင်သွင်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များအားလုံးကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင် သင့်ကားကို တင်သွင်းခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သော အဆင့်များအကြောင်း လေ့လာရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
စင်္ကာပူသို့ ကားတင်သွင်းရန် အဆင့်များ
အဆင့် 1- သင့်ကားသည် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
အဆင့် 2- ကားထုတ်လုပ်သူထံမှ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ရယူပါ။
အဆင့် 3- သင့်ကားကို စင်္ကာပူသို့ ပို့ဆောင်ပါ။
အဆင့် 4- Inward Cargo Clearance Permit ရယူပါ။
အဆင့် 5- ယာဉ်၏အကောက်ခွန်တန်ဖိုး (OMV) အကဲဖြတ်မှုအတွက် လျှောက်ထားပါ။
အဆင့် 6- ယစ်မျိုးခွန်နှင့် ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုခွန် (GST) ပေးဆောင်ပါ။
အဆင့် 7: သင်၏ကားကိုစုဆောင်းပါ။
စင်္ကာပူတွင် ကားမှတ်ပုံတင်ခြင်း အဆင့်များ
စင်္ကာပူသို့ ကားတင်သွင်းခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ
အကြံပြုချက် 1- နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကားများ၏ ဈေးနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အကြံပြုချက် 2- တစ်ပတ်ရစ်ကားများအတွက် မတော်တဆမှုမှတ်တမ်း အချက်အလက်ကို စစ်ဆေးပါ။
အကြံပြုချက် 3- သင့်ကား၏ ရှားပါးအစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးပါ။
အကြံပြုချက် 4- သင့်ကားကို တင်ပို့ရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုန်တင်ပို့ဆောင်သူကို ရှာပါ။
ကားကို ဘယ်ကနေ တင်သွင်းလို့ရမလဲ။
စင်ကာပူသို့ ကားဟောင်းတစ်စီး တင်သွင်းနိုင်ပါသလား။
ကားတင်သွင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းမှာဝယ်တာက ပိုစျေးသက်သာလား။
ကျွန်ုပ်၏ကားကို ကွန်တိန်နာနှင့် RoRo မှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ခြင်းကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
စင်ကာပူသို့ ကားတင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် အဆင့်များစွာရှိသည်။ ဤအဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်၊ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးကာ တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေပါသည်။
စင်္ကာပူသို့ တင်သွင်းမည့် ကားများအားလုံး အလုံးစုံ ပြည့်မီရမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ LTA နှင့် NEA မှသတ်မှတ်သည်။ ကားအသစ် သို့မဟုတ် ကားဟောင်းတစ်စီး တင်သွင်းရန် မစဉ်းစားမီ၊ အောက်ပါတို့ကို သတိပြုပါ။
ကိုက်ညီမှုရှိသော လက်မှတ် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေး လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှ စင်္ကာပူသို့ ၃ လအတွင်း ၎င်းတို့ရောက်ရှိမှသာ မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စာရင်းပေးသွင်းမှုတစ်ခုစီအတွက် $10,000 အပိုကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်သွင်းထားသော ကားဟောင်းများသည် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ပတ်ရစ်ကားများသည် ဂန္ထဝင်ကားများနှင့် 35 နှစ်ထက်ပိုသောကားများမဟုတ်ပါက သက်တမ်း3နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမည်။
ကားတင်သွင်းမှုအားလုံးအတွက် အတိအကျလိုက်နာသင့်သော အခြေခံနည်းပညာလိုအပ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
ကားသည် Exhaust Emission Standards နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။
တင်သွင်းသည့်ကားများသည် ညာလက်မောင်းကားများသာ ဖြစ်ရမည်။
ကားအားလုံးသည် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ရှေ့နှင့်နောက် ဘေးကင်းရေး ခါးပတ်များ တပ်ဆင်ရပါမည်။
ကားအမြန်နှုန်းပြကိရိယာအားလုံးသည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ (km/h) ဖြင့် မောင်းနှင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
ကားအားလုံးတွင် ကျောက်ဂွမ်းကင်းစင်သော ဘရိတ်နှင့် Clutch အနားသပ်ရှိရပါမည်။
ကားများသည် လေအေးပေးစက်အတွက် CFC မပါသော အအေးပေးစက်ကိုသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
ယာဉ်များသည် ရှေ့မီးနှင့် ဘေးကင်းရေးမှန်များအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံတကာယာဉ်ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
type2AC နှင့် combo-2 DC အားသွင်းစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်ယာဉ် (EV) များကိုသာ ခွင့်ပြုသည်
တင်သွင်းလာသောကားများအားလုံးသည် လောင်စာဆီနှင့် ဆီစားနှုန်းစစ်ဆေးမှုများကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
ကိုကိုးကားပါ။ သွင်းကုန်လမ်းညွှန်ချက်များ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အပြည့်အစုံအတွက် LTA မှ ပြင်ဆင်ထားသည်။
ဤကား မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီ ကားထုတ်လုပ်သူထံမှ ရယူရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ဖြစ်သည်-
ကားသည် အသစ် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ ပြေစာကဲ့သို့ အသုံးပြုရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သက်သေပြရန် စာရွက်စာတမ်းများ
သင့်ကားသည် အိတ်ဇောထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများ၊ အိတ်ဇောသံထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ယာဉ်ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သက်သေပြသည့် စာရွက်စာတမ်းများ
UN ECE စည်းမျဉ်းအမှတ် 101 အရ စမ်းသပ်ထားသည့် CO2 နှင့် လောင်စာဆီချွေတာမှုဒေတာပြသရန် လိုက်နာမှုစာရွက်စာတမ်းများ
စင်္ကာပူသို့ ယခင်က ကားအမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် မော်ဒယ်ကို တစ်ခါမှ မတင်သွင်းပါက ထုတ်လုပ်သူထံမှ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်ကတ်တလောက်တစ်စောင်
သင့်ကားကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကို ရွေးချယ်မည်ဆိုပါက၊ သင်သည် ကွန်တိန်နာ သို့မဟုတ် roll-on/roll-off (RoRo) မှတဆင့် သင်္ဘောကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့်ကားကို စင်္ကာပူသို့ ပို့ဆောင်ရန် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင်္ဘောကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူ. ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ၊ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအာမခံတို့ကိုပင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။
M&P International Freights သည် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို တင်သွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ပို့ဆောင်မှု ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ သင်၏ ပို့ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူသည် လိုအပ်ပါသည်။
TradeNet System ကိုအသုံးပြု၍ လျှောက်လွှာတင်ပါ။
ထံမှ အတွင်းပိုင်း ကုန်စည်ရှင်းလင်းရေး ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရယူပါ။ စင်ကာပူ အကောက်ခွန်.
သင့်ကားကို ၎င်း၏ကနဦးတည်နေရာမှ ပို့ဆောင်ပြီးနောက်၊ ၎င်း၏အကောက်ခွန်တန်ဖိုး (OMV) အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုအတွက် သင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ OMV သည် သင့်ကားကို ရောင်းချခြင်းနှင့် ပေးပို့စဉ်အတွင်း ဝယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း၊ သယ်ယူစရိတ်၊ အာမခံနှင့် အခြားကျသင့်ငွေများဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
အောင်မြင်သော အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုအတွက်၊ ဤအရာကို အပြီးသတ်ပါ။ ကြေငြာချက်ပုံစံ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို စင်ကာပူ အကောက်ခွန်ထံ ပေးပို့ပါ။
သယ်ယူခ၊ ကုန်စည်နှင့် အာမခံစာရွက်စာတမ်းများ
ကားဝယ်ယူမှုနှင့် ပို့ဆောင်စဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ငွေပေးချေမှုစာရွက်စာတမ်းများ
အိတ်ဇောထုတ်လွှတ်မှု၊ လေကာမှန်စစ်ဆေးခြင်း စာရွက်စာတမ်း
တင်သွင်းသည့်ကားသည် ကားဟောင်းဖြစ်ပါက မူရင်းနိုင်ငံခြားယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်းနှင့် ကိုယ်ထည်နံပါတ် ဓာတ်ပုံများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် သင်၏ကားကို ကောက်ခံရန် ပါမစ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအခွန်အခများ၊ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအခွန် (GST) နှင့် ယစ်မျိုးခွန်အခများကို ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယစ်မျိုးခွန်အခများသည် OMV ၏ 20% ဖြစ်ပြီး GST သည် ကား၏အကောက်ခွန်တန်ဖိုးနှင့် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်၏ 7% ဖြစ်သည်။ GST သည် နောက်ဆုံးရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းနှင့် ပေးဆောင်ရမည့်တာဝန်များပေါင်း၏ 7% ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤအခကြေးငွေများသည် ဘဏ်အချင်းချင်း GIRO မှတဆင့် စင်ကာပူအကောက်ခွန်သို့ ပေးဆောင်ရသည်။
စင်္ကာပူအကောက်ခွန်ထံ အခကြေးငွေအားလုံး ပေးဆောင်ပြီးပါက သင့်ကားကို ဆိုက်ကပ်ခွင့်ပြုပါမည်။ သင့်ကားကို စစ်ဆေးပြီး မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက ဆိပ်ကမ်းမှ စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
ကားရောင်းဝယ်ရေးမှတစ်ဆင့် ကားတစ်စီးဝယ်ယူရန် ပိုမိုလွယ်ကူသော်လည်း၊ ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းခြင်းသည် 10% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ စျေးသက်သာနိုင်သည်။. အောက်တွင် သင့်ကားကို မြေပြင်ပေါ်တွင် ဆိုက်ကပ်ပြီးနောက် သင်မည်ကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်ရမည်ကို အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်ထားပါသည်။
အဆင့် 1- သင့်ကားမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ပါ။
သင့်ကားကို မှတ်ပုံတင်ရန်၊ Land Transport Authority (LTA) သို့ လျှောက်ထားရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းအများအပြားကို ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်ခွင့်ပြုချက်အတွက် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ-
အိတ်ဇောထုတ်လွှတ်မှု စံနှုန်းများကို လိုက်နာမှု လက်မှတ်
UN ECE စည်းမျဉ်းအမှတ် 85 အရ တိုင်းတာထားသည့်အတိုင်း MPO ကိုပြသရန် လိုက်နာမှုစာရွက်စာတမ်းများ၊
ကားသစ်၊ မှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့သည့် စာရွက်စာတမ်းများ
ကားထုတ်လုပ်သူမှ ပံ့ပိုးပေးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကတ်တလောက်
အဆင့် 2- LTA သို့ လျှောက်လွှာတင်ပါ။
LTA သို့ ကားခွင့်ပြုချက်အတွက် လျှောက်လွှာကို အဆိုပါမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွင့်ပြုချက်စနစ် (VITAS) ဝဘ်ဆိုဒ်။ VITAS လျှောက်လွှာအတွက် $256.80 ကောက်ခံပါမည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကားဟောင်းတစ်စီးကို တင်သွင်းမည်ဆိုပါက လျှောက်လွှာကို သက်တမ်း3နှစ်မပြည့်မီ အနည်းဆုံး3လအတွင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 3- သင့်ကားကို LTA-ခွင့်ပြုချက်စစ်ဆေးရေးစင်တာတွင် စစ်ဆေးရန်အတွက် ပေးပို့ပါ။
သင့်ကားကို အတည်ပြုပြီးပါက၊ နောက်တဆင့်မှာ LTA မှ ခွင့်ပြုထားသော စစ်ဆေးရေးစင်တာတစ်ခုခုတွင် စစ်ဆေးရန်အတွက် ၎င်းကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ VICOM၊ STA နှင့် JIC စစ်ဆေးရေးစင်တာများတွင် စစ်ဆေးရေးခမှာ $64.20 ဖြစ်သည်။
သင့်ကားကို စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် VITAS ခွင့်ပြုချက်ကုဒ် (VAC) ပါသော အတည်ပြုချက်စာတစ်စောင်ကို သင်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ VAC ပြေစာနှင့်အတူ၊ သင်သည် သင်၏ကားကို မှတ်ပုံတင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
အဆင့် 4- ရပိုင်ခွင့်လက်မှတ် (COE) ရယူပါ။
သင့်ကားကို မှတ်ပုံတင်ရန် ဦးစွာ ကတ်ကို ရယူရပါမည်။ COE သင့်ကားပိုင်ဆိုင်သည့် အမျိုးအစားထဲတွင်။
Open COE လေလံတင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကို လစဉ် နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများကို အများအားဖြင့် လ၏ ၁ ရက်နှင့် ၃ ရက် တနင်္လာနေ့ ၁၂ နာရီတွင် စတင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ပြီးဆုံးသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ကားများအတွက် COE အမျိုးအစားများနှင့် 2022 ခုနှစ် မတ်လအထိ နောက်ဆုံးပေါ် COE စျေးနှုန်းများကို ပြသသည်-
1600cc နှင့် 97KW အထိ ကားများ
1600cc သို့မဟုတ် 97KW အထိ ကားများ
လေလံတင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွင်ပါဝင်ရန်၊ လေလံစပေါ်ငွေ $10,000 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး $2 နှင့် $10 ကြားတွင် ဘဏ်မှ ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 5- သင့်ကားအတွက် မော်တော်အာမခံမူဝါဒကို လျှောက်ထားပါ။
မော်တော်ယာဥ်အာမခံပေါ်လစီသည် သင့်အား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုများမှ ကာမိမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားပါက မော်တော်အာမခံပေါ်လစီသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်လျော်သော လွှမ်းခြုံမှုဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ကားဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းများကို ကူညီပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သော မော်တော်ယာဉ်အာမခံသည် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် ယာဉ်မောင်းများအား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျုံးဝင်စေနိုင်သည်။
အာမခံလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက် ၂ ချက်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 6- သင့်ကားကို စာရင်းသွင်းရန် ရက်ချိန်းယူပါ။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ LTA နှင့် ရက်ချိန်းယူပါ။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းခြင်းအတွက်။ သင့်ကားကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း ၈ ခု ရှိပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ဖြည့်စွက်လျှောက်လွှာပုံစံ (ပုံစံ R01)၊
VAC ဖြင့် အတည်ပြုချက်စာ
ယာယီ COE (TCOE)
လေလံယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (VRN) အသိပေးချက်
အဆင့် 7- မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အပိုကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးဆောင်ပါ။
စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြပြီးနောက်၊ သင့်ကားကိုမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် အောက်ပါအခကြေးငွေများကို LTA သို့ပေးဆောင်ရပါမည်-
$10,000 တစ်ပတ်ရစ်ကားတင်သွင်းခ ပိုပေးပါသည်။
VES အပိုကြေး သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းငွေ
အဆင့် 8: မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းကြားစာနှင့် ပြေစာတို့ကို စုဆောင်းပါ။
သင့်ကားကို အောင်မြင်စွာမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်၊ LTA၊ Vehicle Quota & Registration Division (10 Sin Ming Drive၊ Singapore 575701) ထံမှ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပြေစာအကြောင်းကြားစာတို့ကို စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
အဆင့် 9- သင်၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပြားကို ကားပေါ်တွင် ပြင်ပါ။
စင်ကာပူရှိ ကားတိုင်းတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (VRN) ရှိရပါမည်။ သင့်ကားအသစ်အတွက် LTA မှပေးသော VRN ကို အလိုအလျောက်အသုံးပြုရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်စိတ်ကြိုက် VRN တစ်ခုအတွက် လေလံဆွဲနိုင်သည်။
လေလံစျေးနှုန်းများသည် $1,000 မှစတင်ပြီး သောကြာနေ့၊ နံနက် ၁ နာရီမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ညနေ ၄း၃၀ အတွင်း သင့်လေလံကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ မော်တော်ကားတစ်စီး.
ဤသည်မှာ စင်္ကာပူသို့ ကားတင်သွင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး၏ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။
ပို့ဆောင်ခနှင့် အကောက်ခွန်စရိတ်များ အကောက်ခွန်စရိတ်များ၊ သီးသန့်စစ်ဆေးခြင်းအခကြေးငွေများ၊ နိုင်ငံတကာကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု၊ ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုစရိတ်နှင့် သင့်ကားအတွက် ပို့ဆောင်မှုအာမခံ
တစ်ပတ်ရစ်ကား အပိုကြေး $10,000
ယစ်မျိုးခွန် OMV ၏ 20%
GST စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၊ အာမခံနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခနှင့် ကုန်စည်ခွန် စုစုပေါင်း၏ 7%
LTA ယာဉ်ခွင့်ပြုချက်အတွက်လျှောက်လွှာ $286.50
ရပိုင်ခွင့်လက်မှတ် (COE) $99,010 (မတ်လ 2022) အထိ
OMV ၏ ပထမဆုံး S$20,000 အတွက် 100%
လာမည့် S$30,000 အတွက် 140%
180% S$50,000 အထက်
VES အပိုကြေး $10,000 မှ $20,000
စင်္ကာပူသို့ ကားတင်သွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများရှိခဲ့သည်။ COE အပါအဝင် $95,000.
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကားမော်ဒယ်ကို မ၀ယ်ခင်မှာ နက်နက်နဲနဲ သုတေသနလုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဤသည်မှာ စင်္ကာပူသို့ မှန်ကန်သော ကားတင်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အရေးကြီးသော အကြံပြုချက်အချို့ဖြစ်သည်။
မော်တော်ကားဈေးနှုန်းများ အပါအဝင် အချက်အချို့ကြောင့် ထိခိုက်မှုများရှိနေသည်။
လူအတော်များများသည် ၎င်းတို့၏ မူရင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသောအခါတွင် ကားများသည် အမြဲတမ်းစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်ဟူသော အထင်လွဲမှုရှိသည်။ သို့သော်၊ အထူးသဖြင့် ကားဟောင်းများအတွက် အမြဲတမ်း ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်မည်။ BMW သည် ၎င်း၏ မူရင်းနိုင်ငံထက် စျေးသက်သာသည်။
ကားတစ်စီး မတော်တဆမှုဖြစ်ဖူးကြောင်း လက္ခဏာအချို့မှာ မကိုက်ညီသော ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အစားထိုးထားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အကန့်ကွက်လပ်များဖြစ်သည်။ ပြုပြင်မှုညံ့ဖျင်းသောကားကို ဝယ်ယူခြင်းမှ ဖြစ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကား၏မတော်တဆမှုမှတ်တမ်း အချက်အလက်အစီရင်ခံစာကို တောင်းဆိုပါ။
အပြင်ပိုင်း၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် အင်ဂျင်အခြေအနေ
အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရေကြီးပျက်စီးမှု အချက်အလက်
နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ သင်နှစ်သက်သော ကားအမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ်၏ ရှားပါးကားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
Google ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သင့်ကား၏ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများကို စက်တွင်းတွင် အလွယ်တကူ ရှာနိုင်မလား။ ဘို့ ပိုမိုလေးနက်သောနားလည်မှုဖြင့်၊ သင်သည် အခြားခွင့်ပြုနိုင်သောမျိုးကွဲများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များအကြောင်း လေ့လာရန် ပေးသွင်းသူများထံ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်မချမီတွင် ပါ၀င်နိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို သင်သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကားတစ်စီးကို ချောမွေ့စွာ တင်သွင်းရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူကို ရှာဖွေခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သင် ဘယ်သူနဲ့ လက်တွဲချင်တယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ သင့်ရဲ့ သုတေသနကို ပြုလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သင်သည် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံလိုသည်-
သင့်လျော်သောလိုင်စင်၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။
စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ကိုင်တွယ်နိုင်၊ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး, နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအာမခံ မင်းအတွက်
သင့်ကားကို စင်္ကာပူသို့ ယူဆောင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပါမည်။
ဖောက်သည်များအား ကောင်းမွန်သောနှုန်းထားများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အတွက် လူသိများသည်။
M&P International Freights သည် ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်ဟု လူသိများပြီး နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လက်တွဲပြီး အထိရောက်ဆုံး လမ်းကြောင်းများ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းထားများနှင့် အရည်အသွေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါမည်။
မော်တော်ကားတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံများတွင် အဖြစ်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ် သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ဟောင်ကောင်, ဂျပန် သို့မဟုတ် သြစတြေးလျ. ညာလက်မောင်းကားဖြစ်သရွေ့ ၎င်း၏မူရင်းနိုင်ငံမှ ကားတင်သွင်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ဂျပန်မှ Toyota နှင့် Honda နှင့် BMW မှ ဂျာမနီသို့ တင်သွင်းနိုင်သည်။
အသက် 35 နှစ်အောက် ဂန္ထဝင်ကားများမဟုတ်ပါက အသက်3နှစ်အောက် ကားဟောင်းတစ်စီးကို တင်သွင်းနိုင်သည်။ တစ်ပတ်ရစ်ကားတစ်စီးတင်သွင်းခြင်းသည် $10,000 အပိုထပ်ဆောင်းပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
တင်သွင်းလာသော ကားဟောင်းများအားလုံးသည် VICOM Emission Test Laboratory (VETL) တွင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု စမ်းသပ်မှုကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ကုန်နိုင်သော်လည်း သင့်ကိုယ်ပိုင်ကားကို တင်သွင်းရန် သိသိသာသာ စျေးသက်သာပါသည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်စေရန်အတွက် အောက်ပါဇယားကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။
တရားဝင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် (AD) ထံမှ ဝယ်ယူခြင်း
ကားစရိတ် ပိုကုန်တယ်။ စျေးသက်သာတယ်။
မူလ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒေသတွင်း စက်ရုံများမှ ဖြစ်သည်။ မူရင်းထုတ်လုပ်သူထံမှ
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အာမခံ ပိုစိတ်ချရတယ်။ အားကိုးအားထားနည်း
စောင့်ဆိုင်းချိန် ပိုတို သို့မဟုတ် ချက်ချင်း ကြာကြာ
အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ရှာရခက်နိုင်တယ်။
သုတေသနလုပ်ရန် အချိန်ယူပါက AD မှ 1 စီးဝယ်ယူခြင်းထက် စျေးသက်သာသည့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကားတစ်စီးကို တင်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
RoRo နှင့် ကွန်တိန်နာ ပို့ဆောင်မှု နှစ်ခုစလုံးသည် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်သည်။ RoRo ပို့ဆောင်မှုသည် စျေးပိုသက်သာပြီး ကွန်တိန်နာပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုစိတ်ချရသော ထွက်ခွာချိန်နှင့် ဆိုက်ရောက်မည့်ရက်စွဲများရှိသည်။
သို့သော် ကားပိုင်ရှင်အား ကားနှင့်တွဲ၍ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ခွင့်မပြုပါ။ နိုင်ငံတိုင်းတွင် မရရှိနိုင်သော်လည်း ကွန်တိန်နာ ပို့ဆောင်မှုသည် နေရာတိုင်းတွင် ရနိုင်သည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကားကို စင်ကာပူသို့ ယူဆောင်လိုသူတိုင်းအတွက် တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူစေရန် အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူကဲ့သို့ ပို့ကုန်ကျွမ်းကျင်သူကို ငှားရမ်းခြင်းသည် လိုအပ်သည့် အဆင့်အားလုံးကို သိရှိထားသောကြောင့် ကားတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ချောမွေ့စေပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ သင်သည် စင်္ကာပူတွင် မရရှိနိုင်သော ကားတစ်စီးကို အလိုရှိသည် သို့မဟုတ် ငွေစုလိုလျှင် သင်ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းနိုင်သည် ။
စင်္ကာပူရှိ ထိပ်တန်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အပြောင်းအရွှေ့ ၁၁ ခု